ကြေငြာချက်များ - Austin at Education
APIE is honored to be selected as an official Austin Marathon Gives Charity for the 2022 Austin မာရသွန်. This year, the Marathon will take place on Sunday, February 20, 2022. Learn how you can beapart of our team and get involved on our events page. Thank you for your support and efforts on behalf of APIE and the 2,500+ students we serve each year!
APIE’s Board of Directors includes leaders from the education, business, and faith-based communities in Austin. It is the Board’s responsibility to provide guidance in the overall operation of APIE, and raise awareness of our services to gain additional support to enable us to fulfill our mission. Learn more about our new board members on our ဘလော့ဂ်. To seeafull list of APIE’s board members, visit our ဝဘ်ဆိုက်.
APIE သည် Austin ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ ၂၀၂၀ Austin စီးပွားရေးဆုကိုအကျိုးအမြတ်မယူသောအမျိုးအစားတွင်ရရှိခဲ့သည်
အကျိုးအမြတ်မယူသောအမျိုးအစားတွင် Austin ကုန်သည်ကြီးများ Austin စီးပွားရေးဆုများကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ 2020 20 မှတ်သားth နှစ် Austin ကုန်သည်ကြီးများအသင်း မဟာ Austin Business Awards ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဤဆုများသည်ထူးခြားသောအမြင်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြသသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်ဗီဒီယိုဆုအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုရန်နှိပ်ပါ ဒီမှာ။
ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်အင်္ဂါနေ့ပေးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
COVID-19 ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအတွက်အထူးကြီးမားသောညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာကူးစက်ရောဂါမတိုင်မီအတားအဆီးများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် virtual နှင့် hybrid သင်ယူမှုပုံစံအသစ်များနှင့်လျင်မြန်စွာညှိနှိုင်းရပြီးထိုခက်ခဲသောအချိန်များ၌အပိုအထောက်အပံ့လိုအပ်နိုင်သည်။
ကူးစက်ရောဂါစတင်ကတည်းက Austin Partners in Education မှကျောင်းသားများကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောလိပ်အဆင်သင့်နှင့် GEAR UP ပရိုဂရမ်ကိုပြီးခဲ့သည့်မတ်လက virtual format ဖြင့်လျင်မြန်စွာချိန်ညှိခဲ့သည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီစတင်ချိန် မှစ၍ အထက်တန်းကျောင်း ၇ ခုမှ Austin ISD ကျောင်းသား ၁,၂၀၀ ကိုနာရီပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအခြေပြုသင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်းအစီအစဉ်များသည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်လက်တွေ့ကျပြီး၊ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများနှင့်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သော virtual စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၃၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုကျောင်းသားများအဘို့အတက်ဖေါ်ပြခြင်းစောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါ! ဒီပေးခြင်းအင်္ဂါနေ့, အားဖြင့်ပေးခြင်း၏ရာသီကိုချွတ်ကန် Austin ISD ကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ရန်လှူဒါန်းခဲ့သည်. သင်၏လှူဒါန်းမှုသည်ကြီးမားသည်ဖြစ်စေအသေးစားများကကျောင်းသားများအားပုံမှန်တက်တက်ကြွကြွကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အားပေးမှုကိုပေးလိမ့်မည်။
APIE ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်အားကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များလိုချင်သည်!
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးစက်တင်ဘာလ 16, 2020
APIE Virtual Mentoring နှင့် Math Classroom နည်းပြသင်တန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တရားဝင်ဖွင့်နိုင်သည်။ ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပွားသောသင်ယူမှုပြတ်တောက်မှုများကြောင့်ကျောင်းသားများသည်တစ် ဦး ချင်းကူညီမှုကိုအရင်ထက်ပိုလိုအပ်ကြသောကြောင့်သင်တို့၏အကူအညီလိုအပ်သည်။ ဤသည်အိမ်မှလုံခြုံစွာလုပ်အားပေးရန်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခွင့်အလမ်းများကိုကျောင်းဝင်းပေါ် မူတည်၍ စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ APIE နှင့်လုပ်အားပေးရန်စဉ်းစားသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မှတ်ချက် - ကျောင်းအခြေပြုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (APIE နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ) လည်းဖွင့်လှစ်ထားသည်။ စာရင်းမသွင်းထားသောကျောင်းများသည်ဤအချိန်တွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ
COVID - APIE နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအပေါ် ၁၉ ခုသက်ရောက်မှု
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသြဂုတ်လ 17, 2020
ဤမသေချာမရေရာသည့်အချိန်များတွင် APIE သည် Austin ISD နှင့် ၂၀၂၀-၂၁ ကျောင်းစာသင်နှစ်အတွင်းကျောင်းသားများကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးကူညီမည်ကိုအနီးကပ်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည်။ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်အင်္ဂါနေ့၊ စာသင်နှစ်သစ်အတွက်လက်ရှိစတင်ရက်စွဲမှာပြက္ခဒိန်သည်ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်ကြာဝေးလံသောသင်ယူမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းပညာ (သို့) အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုမသုံးနိုင်သောကျောင်းသားများအတွက်ပထမလေးပတ်အတွင်းကျောင်းဝင်းတွင်းသင်ကြားပို့ချမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းနှင့်စတင်သည်။ ။ ဤပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် Austin ISD's သို့သွားပါ ဝဘ်ဆိုက်.
ခရိုင်ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်စာသင်နှစ်အတွက်အစီအစဉ်များသည်ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုကို ဦး စားပေးရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအတွက်အန္တရာယ်အကင်းဆုံးသင်ယူနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးရန် COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချရန် Austin ISD ၏ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်းမင်းသည်အစုစပ်လေ့လာသင်ယူမှုပုံစံအားမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများကိုစီစဉ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Austin ISD မှပိုမိုလေ့လာသင်ယူသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအားအသိပေးလိမ့်မည်။
လတ်တလောတွေ့ရှိချက်များ အနောက်မြောက်အကဲဖြတ်အဖွဲ့ (NWEA) “ COVID slide” သို့မဟုတ်ယခင်ပညာသင်နှစ်ကသိမ်းဆည်းထားသောဗဟုသုတဆုံးရှုံးမှုသည်ဘာသာရပ်များအထူးသဖြင့်သင်္ချာဘာသာရပ်၌ကျောင်းသားများအားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကိုပြသပါ။ ကျောင်းသားများသည် ၅၀၁TP1T1T ထက်နည်းသောသင်္ချာပညာသင်ယူမှုဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပြီးနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှပုံမှန်အခြေအနေများတွင်တွေ့မြင်ရမည့်အရာများနောက်နှစ်တစ်နှစ်နီးပါးရှိသည်။ ပညာရေးကွာဟချက်များနှင့်အတူကျောင်းသားများသည်စိတ်ရောဂါနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ကျောင်းပြန်လည်စတင်သည့်အခါကျောင်းသားများသည်တစ် ဦး ချင်းအာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ၁၅ နှစ်ကျော်ကျူရှင်နှင့်လမ်းညွှန်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ APIE သည်အလွန်လိုအပ်နေသောအထောက်အပံ့ကိုပေးရန်အနေအထားကောင်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းတစ်လျှောက် APIE သည် Austin ISD ကိုထောက်ပံ့ရန်လျင်မြန်စွာညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်းမင်းကိုသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ကျောင်းများပိတ်ပြီး Virtual သင်ယူခြင်းကိုကျင့်သုံးသောအခါ APIE ၀ န်ထမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောလိပ်အဆင်သင့်အစီအစဉ်နှင့် GEAR UP တွင်ပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများကိုအွန်လိုင်းမှအထောက်အပံ့ပေးရန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ အမြတ်အစွန်းများစွာမယူသည့်နည်းတူ APIE သည် COVID-19 မှငွေကြေးအရသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ထောက်ခံသူများတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့်ဤဘဏ္financialာရေးအခက်အခဲသည်ကျန်ရှိသောနှစ်များတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ မင်းရဲ့အကူအညီလိုတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များသည်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ယခင်ကထက်ပိုမိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့မှုများလိုအပ်မည့်အချိန်တွင်ဤကျဆုံးခြင်းကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
Austin Partners မှပညာရေး၌ AISD Career Launch / P-TECH တိုးချဲ့မှုကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက် Greater Texas Foundation မှ $450,000 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
“ တက္ကဆက်ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း” စီမံကိန်းသည်ဘွဲ့ရပြီးသည့်နောက်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသောကျောင်းသူ / သားများကိုပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်
တစ် ဦး ထံမှ $450,000 ထောက်ပံ့ငွေ သာ။ ကွီးမွတျတက္ကဆက်ဖောင်ဒေးရှင်း (GTF) သည် Austin Partners မှပညာရေး (APIE) ၏အားထုတ်မှုများကို Career Launch / P-TECH အစပျိုးမှုနှင့်တိုးချဲ့ရန်စံပြဖန်တီးရန်အားထုတ်လိမ့်မည် Austin ISD လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး Launch / P-TECH အစီအစဉ်များသည်အထက်တန်းကျောင်းသားများအားဘွဲ့ရပြီးနောက်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်လိုအပ်သောဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အထောက်အထားများဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ Career Launch / P-TECH အစီအစဉ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ရပ်ကွက်ရှိအလုပ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရန်သေချာစေသည်။
တက္ကဆက်ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့် APIE သည်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၊ အရင်းအမြစ်ကွာဟချက်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့် မှစတင်၍ ပညာရေးအထောက်အပံ့များအားပိုမိုခိုင်မာစေရန်စိတ်ကြိုက်မဟာဗျူဟာများဖန်တီးရန်စီစဉ်သည်။ ၎င်းသည်အထက်တန်းကျောင်းတွင်ကောလိပ်အဆင့်သင်ကြားမှုကိုအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ပြီး၊ သက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဘွဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထူးအချက်အလက်များပါဝင်သော Career Launch / P-TECH အစီအစဉ်မှထွက်ပေါ်လာမည့်ကျောင်းသားများအတွက်ပိုက်လိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
COVID-19 ကြောင့်လာမည့်စာသင်နှစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုများရှိနေသော်လည်းယခုနှစ်plannedဂုတ်လတွင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းအစီအစဉ်သည်ရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ APIE သည်ကျောင်းခရိုင်၊ စီမံကိန်းစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်နီးကပ်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်သည်။
APIE သည်သူတို့၏စီမံကိန်းသုတေသနတွင်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည် Akins အစောပိုင်းကောလိပ် High School တွင် (ECHS) ကယခုနှစ်ကျရင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး Launch / P-TECH အစီအစဉ်သစ်နှစ်ခုကိုစတင်တော့မှာပါ။ Realtors ၏ Austin ဘုတ်အဖွဲ့ Austin ISD နှင့်ဒေသန္တရတက္ကသိုလ် ၃ ခုနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်ကြားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ APIE သည် Akins ECHS နှင့်ခိုင်မာသည့်မိတ်ဖက်တစ်ခုရှိပြီးလွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်တွင်သူတို့၏ကောလိပ်အဆင်သင့်အစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
Akie အစောပိုင်းကောလိပ်အထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းအုပ်ကြီး Tina Salazar က“ APIE ရဲ့ကောလိပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအစီအစဉ်မှာကျောင်းသားတွေဟာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ရလဒ်ကောင်းတွေရခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Career Launch / P-TECH အစီအစဉ်၏နောက်အဆင့်သည် Akins ၌ယခုဆောင်း ဦး ရာသီ၌စတင်သည်နှင့် APIE ၏အကူအညီသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းမှုကိုအဆင့်သစ်သို့တက်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။
ဤစီမံချက်သည် APIE ၏သိသာထင်ရှားသည့်စနစ်တကျအတားအဆီးများကိုရင်ဆိုင်သောကျောင်းသားများကိုကူညီရန်ကတိကဝတ်ကိုထင်ဟပ်သည်။ Akins ECHS တွင် Austin ISD တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအထက်တန်းကျောင်းရှိကျောင်းသား ၂၇၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ကျောင်းသား ၇၇.၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဟစ်စပန်းနစ်ဖြစ်ပြီး ၅.၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာလူမည်းများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၆၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်စီးပွားရေးအရအခွင့်အလမ်းနည်းပါးပြီး ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ကြားသူများဖြစ်ပြီး ၁၂.၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်အထူးပညာရေးတွင်ပါ ၀ င်ကြသည်။
"တက္ကဆက်ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်သုံးပုံနှစ်ပုံဟာဒုတိယအဆင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေလိုအပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လူကြီးလူငယ် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းကသာဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်၊ နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ Austin Partners ၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကပြောကြားသည်။ “ Career Launch / P-TECH အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်အကြွေးများကိုအလုပ်အကိုင်အခြေပြုသင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံများနှင့်တွဲဖက်ပြီး၊ အသေးစိတ်ပရိုဂရမ်ပုံစံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည် Austin ISD တစ်လျှောက်သာမကတက္ကဆက်ပြည်နယ်တစ်လျှောက်ရှိကျောင်းသားများအားပါ ၀ င်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားရေရှည်ကတိကဝတ်ပြုမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွက်သာ။ ကြီးမြတ်တက္ကဆက်ဖောင်ဒေးရှင်းအားကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
APIE သည် Austin ISD နှင့် Black ကျောင်းသားများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရပ်နေသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်ရပ်ရွာလူထုအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိနေသောနက်ရှိုင်းသောမမျှတမှုများကိုသတိရစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်တကျအတားအဆီးများကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော Black ကျောင်းသားများအားကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံမှုတွင်တည်မြဲနေပြီးကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းများကိုတက်ကြွစွာပညာပေးခြင်းနှင့်ဤစကားပြောဆိုမှုများတွင်အနက်ရောင်အသံများမြင့်တက်ခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ Austin ISD ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအားလေးစားခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်းနှင့်တန်းတူညီမျှမှုနှင့်တရားမျှတမှုတို့ကိုသေချာစေရန်အာမခံခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်သည်။
Austin ISD ၏ထုတ်ပြန်ချက်